အင်တာနက်ခေတ်မှာ ရင်ခုန်စရာ စာအိတ်ဖြူလေးများ – YANGON STYLE
အင်တာနက်ခေတ်မှာ ရင်ခုန်စရာ စာအိတ်ဖြူလေးများ
ကမ္ဘာကြီးဟာ ရွာကြီးအနေနဲ့ ခေတ်မီတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ ကမ္ဘာပေါ်က နိုင်ငံတွေအချင်းချင်း စီးပွားရေး၊လူမှုရေး၊ယဉ်ကျေးမှု အရာအားလုံးတပြေးညီ အဆင့်မြင့်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံနဲ့တစ် နိုင်ငံ သတင်းတွေ၊ မိသားစု၊မိတ်ဆွေတွေ အချင်းချင်းအပြန်အလှန် ဆက်သွယ်ရာမှာလည်း နေ့ညမရွေး လွယ်ကူ အဆင်ပြေချောမွေ့လာခဲ့ပါတယ်။
ရှေးယခင်က အချင်းချင်းဆက်သွယ်ကြတဲ့အခါမှာ စာလေးတွေရေးပြီး စာတိုက်ကနေပို့ဆောင် ဆက် သွယ်ကြပါတယ်။ မြို့နယ်တိုင်းမှာ စာတိုက်တွေရှိပြီး စာပို့သမားတွေက စာအိတ်ပါလိပ်စာအတိုင်း လိုက်လံ ပို့ ဆောင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ၁၉၃၇ခုနှစ်တွင် အိန္ဒိယနှင့်ခွဲထွက်ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သီးခြားစာတိုက်နဲ့ကြေး နန်း ညွှန်ကြားရေးဝန်ချုပ်ရုံးကို စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းရဲ့ စာတိုက်လုပ်ငန်းကို သမိုင်းများအရ ၁၈၂၇ခုနှစ်မှာ စစ်တွေစာတိုက်ကို ဖွင့်လှစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စာတိုက်လုပ်ငန်းကို စတင်ခဲ့တာ လို့ သိရပါတယ်။
ရှေးမြန်မာမင်းများလက်ထက်က မြင်းလျင်တော်၊ခြေလျင်တော်၊လှေလျင်တော်များနဲ့ ဘုရင့်စာချွန် တော်များကို လက်ဆင့်ကမ်းစနစ်နဲ့၄င်း၊ တောက်လျှောက်သယ်ယူပြီး၄င်း ပို့ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။ မှတ်တမ်းများ အရ ၁၈၂၇ခုနှစ်တွင် စစ်တွေစာတိုက်၊ ၁၈၅၂ခုနှစ်တွင် ပဲခူးစာတိုက်၊ ၁၈၅၄ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်စာတိုက်ကြီးကို လည်းကောင်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ၁၉၄၉ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာ့စာပို့တိုက်ဌာနကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့ ပါတယ်။
စစ်မဖြစ်မီက မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာ စာတိုက်ကြီး၊ငယ်ပေါင်း -၆၂၅ခုရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ခုနှစ်တွင် လုပ်ငန်း ပြည့်-၇၈၂လုံး၊ စာတိုက်ခွဲ -၂၀၈ရုံး၊ ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ် -၃၁၉ရုံး၊ စုစုပေါင်း -၁၃၈၁ရုံး ရှိ လာခဲ့ပါတယ်။ အမြန်ချောပို့လုက်ငန်းကိုတော့ ၁၉၉၂ခုနှစ်၊ဧပြီလမှာ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမြန်စာပို့လုပ်ငန်းကို ၁၉၉၅ခုနှစ်၊ဇန်နဝါရီ ၂ရက်နေ့မှစပြီး စင်္ကာပူနိုင်ငံနဲ့ စတင်ဆောင် ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်၊
ရန်ကုန်စာတိုက်ကြီးဟာ ရန်ကုန်မြို့ ကမ်းနားလမ်းနဲ့ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းထောင့်မှာ တည်ရှိပါတယ်။ ၂၀၁၅ခုနှစ်၊မေလမှာ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရဲ့ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်အဆောက်အအုံ များစာရင်းတွင် ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ ဗိသုကာလက်ရာများနဲ့ ဂေါသ့်လက်ရာ ပြတင်းပေါက်များ၊ လှပတဲ့ဆင်ဝင် ကြီး၊ အဝင်ခန်းမတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာ သံလှေကားကြီးနှစ်ခုပါဝင်တဲ့ ကြက်သွေးရင့်ရောင် ရှေးဟောင်းအ ဆောက်အအုံကြီးဟာ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အထိမ်းအမှတ်ကြီးတစ်ခုအဖြစ် ကမ္ဘာ့လှည့်ခရီးသွားများကို ဆွဲဆောင် လျက်ရှိနေပါတယ်။
ယနေ့ခေတ်လို အင်တာနက်များ၊ ဖေ့ဘုတ်စ်၊အီးမေလ်းများနဲ့ တခြားအက်ပလီကေးရှင်းတွေ ခေတ်စား နေတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ မိသားစု၊မိတ်ဆွေ၊ချစ်သူတွေဆီကို ကိုယ့်လက်နဲ့ သေချာရေးထားတဲ့ စာလေး တစ်စောင်လောက် ပို့ဖို့စိတ်ကူးကြည့်လိုက်ပါလား။ သိပ်ကို ကြည်နူးပျော်ရွှင်ဖွယ် အချိန်တွေကို ပိုင်ဆိုင်လိုက် နိုင်ပါတယ်နော်။
By : Myo Wai Thu
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကျော် စားသောက်ဖွယ်ရာများနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက လူကြိုက်အများဆုံး အစားအစာများ
Nature Republic ချစ်သူတွေအတွက် ချစ်ပြီးရင်းချစ် ထပ်ထပ်ချစ် promotion အစီအစဉ်
Forbes က ထုတ်ပြန်တဲ့ ကိုဗစ်အလွန်ခရီးသွားခြင်းအတွက် ( ၇) နိုင်ငံစာရင်းမှာ မြန်မာပါဝင်လာ
၂၀၂၂ ကမ္ဘာ့ဖလား ခြေစစ်ပွဲ၌ မြန်မာအသင်းက ဂျပန်အသင်းကို အိမ်ကွင်းတွင် နှစ်ဂိုးပြတ်ဖြင့် ထပ်မံရှုံးနိမ့်
ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိ Churchကျောင်းမှ zoom ကိုတရားစွဲဆိုခဲ့
ရောက်ခဲ့ဖူးသည့် ပင်လောင်းဟော်နှင့် ညောင်ရွှေဟော်
1. Plus Size တွေအတွက် အဝတ်အစားဝယ်ယူဖို့အဆင်ပြေစေမယ့် ရန်ကုန်မြို့က ဆိုင် (၄) ဆိုင်
2. ဟော့ပေါ့နဲ့ အကင်ကို ၇၇ဝဝ ဆိုလို့သွားစားခါမှ မျက်လုံးပြုးပြီးပြန်လာရတဲ့အဖြစ်
3. JLPT စာမေးပွဲများကို လွယ်လွယ်ကူကူ ဖြေဆိုအောင်မြင်နိုင်ရန် 👩‍🎓
4. ရိုးသားစွာ ကြက်သားစားနိုင်ကြပါစေ
5. တိမ်မြှုပ်နေတဲ့အလှတရားများပြည့်နှက်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်　တောင်ဘက်ပိုင်းက　ကျောက်ဖြူမြို့လေး (ရမ္မာဝတီ) 🌊⛰
YANGON STYLE ではアンケートモニターを募集しています（無料）。
Yangon Style တွင် အွန်လိုင်းစစ်တမ်းကောက်ယူမှုများအတွက် ပါဝင်ဖြေဆိုလိုသူများကို စုဆောင်းလျှက်ရှိပါသည် (အခမဲ့ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်)။စာရင်းပေးသွင်းထားပြီး စစ်တမ်းများကို ဖြေဆို၍ လက်ဆောင်ဖုန်းငွေဖြည့်ကတ်နှင့် လဲလှယ်နိုင်သော ပွိုင့်များကို ရယူလိုက်ကြရအောင်.........
အီးမေးလ် မဂ္ဂဇင်းအတွက် စာရင်းပေးသွင်းခြင်း
Yangon Style မှာ အဖွဲ့ဝင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် နောက်ဆုံး သတင်းအချက်အလက်များကို သိရှိနိုင်ပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါ Button ကိုနှိပ်၍ အီးမေးလ် မဂ္ဂဇင်းအတွက် စာရင်းပေးသွင်းကာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
YANGON STYLE life&trend Mediaに広告掲載しませんか　商品訴求や人材募集など様々なジャンルでの広告主様を募集しています。
YANGON STYLE life&trend Media ကဏ္ဍတွင် လူကြီးမင်းတို့၏ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ထမ်းခေါ်ယူမှု အစရှိသည့် ကဏ္ဍအမျိုးမျိုးနှင့်သက်ဆိုင်သော ကြော်ငြာများကိုလည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။
Yangon Style by EBP Inc.
No.255/256, Room No.4(C),
5floor, Seikkanthar st(Upper),
Kyauktada Township, Yangon.
ABOUT YANGON STYLE
Recruitment of writers
Copyright©2019. Doctoral Institute for Evidence Based Policy, Inc. All Right Reserved.